कथा : फेरिएको साइनो - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← नियात्रा : मुक्तिनाथ यात्राका चीरस्मृत सम्झनाहरू
पुस्तक समीक्षा : बिसे नगर्चीको खोजीबारे केही कुरा →
नभेटूँ भन्छुु, नदेखूँ भन्छुु तर पनि त्यहीँ पुुग्छुु सधैँ । के गर्नु समयको खेला हो । समयले मसँग खेल्यो । मेरो परिवारसँग खेल्यो । के हो त्यो, को हो त्यो मलाई थाहा छैन । थाहा पाउन पनि चाहँदिन, जसबाट मेरो परिवार बिछोडियो । एकै झड्कामा को कहाँ को कहाँ सबै तितरबितर भयो । बस् म यहाँ भएँ मेरो बाबा सम्हालिनुुभयो । अहिले म बाबाको साथमा छुु, तर पनि त्यो अभाव सधैँ खट्किरहनेछ । त्यो छायाले सधैँ पछ्याइरहेछ, बाटोभर अरुको आमाछोरा, आमाछोरी हिँडेको देख्छुु, बोलेको देख्छुु । मुुटुु पोल्छ । मेरी आमा हाम्रो साथमा भइदिएको भए ……..!
‘यति बेलासम्म उठ्नुुपर्दैन ? ६ बजिसक्यो !’ ओछ्यानबाटै ममीको कर्कश आवाज सुनेँ, “…………………. तेरो बाउलाई हाम्रो मतलब छैन, विदेशमा…………….सँग मस्ती गरेर बसिरहेको होला ! मलाई भने सधैँको यो टेन्सन ! छिटो उठ् ! स्कुुल जान ढिला हुुनलागिसक्यो ! तयार हो छिटो, म खाना पस्किन्छुु ।”
बिहानको ८ बज्नलागेको थियो । स्कुुल जाने नजाने, कसरी जाने केही निर्णय लिन सकिनँ । चोकमा गएँ तर त्यो चोकमा स्कुुल जानको लागि न मेरो त्यो साथी आयो, न उसको ड्याडी नै । म सरासर उसको घरमा पुुगेँ । उसको घरको अवस्था पनि मेरो जस्तै रहेछ । साथी भन्दै थियो, ‘हिजोदेखि ड्याडी घर आउनुुभएको छैन । ममीले एकदम पिर गर्नुुभएको छ । कहाँ जानुुभयो होला !’ उनीहरुको कुरा सुन्नेबित्तिकै मैले ‘आन्टी ! मेरो ममी पनि हिजोदेखि आउनुुभएको छैन । ड्याडी परदेशमा हुुनुुहुन्छ । रातभरी ममीलाई कुरेर बसेँ तर आउनुुभएन । हजुुरहरुलाई केही थाहा छ कि भनेर सोध्न आएको !’ भनेँ । सायद साथीको ममीले अब अनुमान लगाइसक्नुभएको थियो ।
ड्याडी पनि विदेशबाट फर्किसक्नुुभएको छ । अहिले हाम्रो सानो घर छ । ड्याडीले नेपालमै एउटा सानो बिजनेस सुरु गर्नुुभएको छ । साथीको पनि घरगाडी सबै छ । साथीको ड्याडी हुुनुुहुन्न । सबथोक मम्मी हुुनुुहुुन्छ । मेरो ममी हुनुहुन्न । सबथोक ड्याडी हुुनुुहुन्छ । सबै काम हामीले मिलेर गर्छौँ । म सधैँ यही चोक भएर अफिस जान्छुु, गाडी रोकेर विगत सम्झिन्छुु मनभपरि पीडा हुन्छ तर पनि यो चोकमा पुगेपछि यताउति हेर्न छाडेको छैन । कतै मम्मी आइहाल्नु पो हुन्छ कि …..!
This entry was posted in नेपाली कथा and tagged Suresh Raut. Bookmark the permalink.